Ciidanka ASWJ ee gobolka Gedo oo agab milatari iyo mushaaraad la gaarsiiyay. – Radio Daljir
Diseembar 20, 2012 1:54 b 0
Balad-xaawo, Dec, 20- Wararka ay daljir ka helayso gobolka Gedo ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaa soo sheegaya in ciidanka ASWJ ee gobolkaasi la gaarsiiyay hub iyo mushaaraad.
Taliye ku xigeenka ASWJ ee Gedo oo waraysi siiyay daljir ayaa ka warbixiyay agabkaasi milatari iyo mushaaraadka ay heleen ciidanka daacadda u ah AWSJ oo qaybta ka ah dagaalka lagaga soo horjeedo xooggaga Alshabaab oo ka dagaalama meelo ka mida Soomaaliya.
Ciidanka la siiyay agabka dagaal iyo mushaaraadka ayaa ku kala sugan degmooyinka Dooloow,Luuq iyo Balad-xaawo oo ay ku sugan yihiin ciidanka maamulka ASWJ, sidoo kale sargaalkaasi ka tirsan ASWJ ayaa tilmaamay in sidoo kale hub iyo mushaar la siiyay ciidanka DF ee Soomaaliya.
Taliyaha ayaa dhanka kale carabka ku dhuftay in saraakiisha ciidanka dawladda ay tababaro siinayaan ciidanka dawladda iyo kuwa Ehlu sunna waljamaaca oo ku wada sugan gobolka, isla markaana hada wixii ka danbeeya laga kaaftoomi karo tababaradii ay bixin jireen saraakiisha Itoobiya.
Caawa iyo Daljir, Arbaca, Dec 19, Maxamuud Cabdi Ibraahim ( Daljir Boosaaso )